Free Antivirus Software from Microsoft | U.N.O.B
Downloads, Free Anti-Virus
Hi! everyone, If you ever needed an anti-virus software for “FREE”, Microsoft has finally released Windows Security Essentials. It offers decent protection and it is not like any other “FREE” Anti-virus Softwares which are tend to kill you to death. I downloaded it last night and it is running really smooth on mine.
here is the link ,
Min Koot Thee September 24, 2011 at 3:11 am Reply
Hello! Thanks so much for your contribution but it’s quite funny for me when I’ve downloaded that one. They asked me to validate the genuine window. Mine is fake. That’s why I have to find the genuine key..ha..ha..
Than Naing February 3, 2011 at 11:55 pm Reply
I just installed this software. It work good. Thanks Ko Htun Linn.
Paul March 29, 2010 at 2:13 pm Reply
thank you for this kind of post. this is why we neededacommunity. this post save me moneyalot. I had three computers in my house and now I have antivirus software on all machines. thanks UNOB
admin February 6, 2010 at 3:39 pm Reply
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှိရှိသမျှ Windows User တွေရဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာဝေဖန်မှုတွေကြောင့် နောက်ဆုံး Microsoft ကိုယ်တိုင် Security Essential (Anti-Virus Software) ကို ထုတ်ပြီး အလကားပေးလိုက်တာပါ၊ ဘယ်သူ့ဆီမှာမှ ငွေပေး ၀ယ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ပုံမှန်အားဖြင့် Anti-Virus Software တွေကလဲ နှစ်တိုင်း Update လုပ်ရင် ငွေပေးရပါတယ်။ Windows ကလဲ version အသစ်ပြောင်းရင် ငွေတောင်းတယ်။ အကုန်လုံးက ကုန်ပေါက်ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ လုံခြုံမှုအတွက်လဲ အာမ မခံနိုင်ဘူး။ ပိုဆိုးတာက Internet ထဲမှာ Free Anti-Virus ဆိုတဲ့ Fake Software တွေကြောင့် I.T ဗဟုသုတနည်းတဲ့ User တွေ ခဏခဏ ဒုက္ခများကြရတယ်။
ဒါပေမယ့် အထူးသတိထားရမှာက Anti-Virus Software ထည့်ထားတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ Computer က 100% safe မဖြစ်ပါဘူး။ User အပေါ်မှာလည်း မူတည်ပါသေးတယ်။ Internet နေ့တိုင်းသုံးသည့် သူများ၊ Download အမြဲလုပ်သည့်သူများ ပိုပြီးသတိထားရပါမယ်။ အလကားရတိုင်း Download အကုန်လျှောက်မလုပ်ပါနဲ့၊ ရှောင်ရှားရမည့် Web Site များကို ရှောင်ပါ။ ကိုယ်မသိတဲ့ Junk Email များကို မဖွင့်ပါနဲ့၊ Email ထဲမှာ ပါတဲ့ Link တွေကို သတိထားပါ။ ဒီအချက်များကိုသာ သတိထားနိုင်ပါက Anti-Virus Software မလိုပါဘူး။ ရှိထားတာကတော့ ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။
Anti-Virus Software ကိုထည့်ပြီးလျှင် Setting မှာ နေ့တိုင်း Auto Update ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးထားပါ၊ အနည်းဆုံး တစ်ပါတ် တစ်ခါ အချိန်ပေးပြီး PC scan လုပ်ပါ။ အခြား Anti-Virus software များကို ပြန်ဖျက်ပါ။ Software များ စုပြုံ အလုပ်လုပ်နေမှုကြောင့် PC performance နှေးသွားနိုင်ပါတယ်။
Than Naing February 6, 2010 at 12:12 pm Reply
Did you mean it work the same with Antivirus and Internetsecurity from AT&T, and I no longer need to buy from them?